Home Wararka Waa kuma musharaxa Farmaajo uu wato ee Puntland?
Waa kuma musharaxa Farmaajo uu wato ee Puntland?
Musharaxa madaxweynaha Puntland Maxamuud Khaliif Jebiye ayaa si xawli ah u wada ol’olihiisa doorashada ee madaxtinimada maamulkaas, isaga oo booqanaya deegaano badan, kuna deeqay lacag kumaan dollar ah.
Previous articleHow Kenyan police let in Somalia’s Shabaab bombers
Next articleDowladda Federaalka ah oo shaacisay sababta ay kooxda QM ugu diiday keydka hubka dowladda
Muqdisho Online - Xafiiska wararka ee Gobolka Banaadir. Waxaad nagala soo xiriir kartaa muqdishonl[email protected] ama twitter @muqdisho_online
Farmaajo oo diiday in xafladda 1da Luulyo lagu qabto xarunta Gobolka...
Magaalada Kismaayo oo cawa laga dareemayo dhaqdhaqaaqyo ciidan